Olee otú Iji Travel Safely N'oge The Coronavirus akasiaha | Save A Train
Home > Travel Europe > Olee otú Iji Travel Safely N'oge The Coronavirus akasiaha
(Emelitere ikpeazụ On: 04/04/2020)
The Coronavirus akasiaha kemgbe a nnukwu akpata nchegbu n'ihi na ndị mmadụ gburugburu ụwa, ma ikekwe otu nke kasị ukwuu okwu na ihu njem. N'ihi na njem atụmatụ ndị siri ike ịgbanwe na tiketi mgbe ama gbaa akwụkwọ, o nwere ike ime ka ndị ọzọ uche maka gị ịnọgide na atụmatụ gị kama ịkagbu. Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ na-eme otú ahụ, -uru nke ndị a Atụmatụ iji jide n'aka na ị na-eme njem ahụ n'enweghị n'oge Coronavirus akasiaha ma na-niile Corona ọhụrụ mmelite.
Okporo ígwè Transport bụ Eco-Enyi na Enyi na kasị dịrị nchebe Way To Travel. nkena-isiokwu e dere na-akụziri banyere Train Travel site Save A Train, Ndị dị ọnụ ala Train Tickets weebụsaịtị Na The World.
First, ihe kpọmkwem bụ Coronavirus? Ọ bụ a nje nke virus na mejupụtara ndị dị otú ahụ akụkụ okuku ume na ọrịa dị ka Middle East akụkụ okuku ume na ọrịa (MERS) na Siri nnukwu akụkụ okuku ume ọrịa (SARS). Nke a afọ akwụkwọ Coronavirus na-akpọ ógbè COVID-19 na kweere na sitere na Hubei n'ógbè Chile China, n'obodo Wuhan. Ọ bụ a ukwuu na-efe efe ọrịa na oyi-dị ka ihe mgbaàmà, tinyere fever, akpịrị mgbu, ụkwara, na a runny imi. Ebe ọ bụ na mbụ wee ude na January, ọrịa ahụ agbasawo gafee ukwuu nke Asia na ọzọ nke ụwa, emetụta mba ndị dị ka Japan, South Korea, Italy, United States, na Iran. Nke a emeela ka njem mgbochi ma ọ bụ njem advisories n'ọtụtụ ebe, ezie na ọtụtụ ndị ọzọ ka na-viable maka njem.
Olee otú Iji Travel Safely N'oge The Coronavirus akasiaha?
While the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ka aka ná ntị megide-adịchaghị mkpa njem ndị mba kasị ukwuu emetụta, ọtụtụ n'ime ụwa na-ahụ naanị, ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla ikpe. The World Health Organization ka e weere COVID-19 a Public Health Emergency nke International Nchegbu kama a ọrịa, nke pụtara na ị nwere ike na-na na ndị njem atụmatụ ma ọ bụrụ na ị na-akpachara anya. Dị nnọọ na mmezi elekọta iji na-enwe ahụ ike iji ndị a Atụmatụ:
NDỤMỌDỤ 1: Nweta All Your Vaccines
Ezie na nke a nwere ike iyi ihe doro anya, na ọ dị mkpa iji jide n'aka na ị nwetara gị niile ọgwụ mgbochi tupu amalite njem gị. Iji chọpụta ihe gbaa ị ga mkpa tupu ị na-aga, ịlele CDC si website maka ahụ ike ọmụma. Ime n'aka na ị na-echebe site na dị ka ọtụtụ igbochi ọrịa dị ka omume bụ isi ihe na-eburu gị na dịghịzi usoro ike.
NDỤMỌDỤ 2: Weta Disinfecting ekpochapụ
Ụfọdụ n'ime ndị kasị njọ outbreaks a hụrụ na ebe na nso kọntaktị, dị ka iche Diamond Princess ụgbọ ụgbọ mmiri na Japan, nke foduru akwụsịtụ dị nnọọ ná mpụga nke Tokyo. Ọ bụrụ na ị na-na-ejegharị ejegharị n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ na njem, dị ka a ụgbọelu, Jide n'aka na-na-gị na ebe dị ọcha. Weta na antibacterial ekpochapụ na ọcha gị ebe mgbe ị na-abata. Nke a na-agụnye ikpochapụ gị armrests, cupholders, tree tebụl na mpaghara ọ bụla na ị ga-bi.
NDỤMỌDỤ 3: Nọgide Na-Aka Clean Ọ bụrụ na ị chọrọ ịga Safely N'oge The Coronavirus akasiaha
Ezie na ọtụtụ ndị na-agbalị izere nke virus via ihu masks, n'ezie, dọkịta chọpụtara ndị ihe ka ihe ọ bụla na-ị na ike. Kama, aka saa mgbe a na-hụrụ na-kasị dị irè na na-anọ mma. Ọ bụrụ na ị na-ejegharị ejegharị ebe ebe ị ga-ugboro ugboro na-enwe ike-asa aka gị, wetara n'aka sanitizer kama na-eji ya ahụ ugboro ugboro.
Na nke a otu akwara, na-aka gị anya gị ihu, n'ebe ọnụ gị na anya. These are the higher risk areas for you to get an infection.
NDỤMỌDỤ 4: Nweta Travel Insurance
Ọ bụrụ na ị na-na na US dabeere na, ọtụtụ n'aka kaadị eche wuru na- njem mkpuchi, ezie na ị ga-mkpa iji chọpụta na gị na kaadị issuer ahụ ma ọ bụrụ na ọhụrụ Coronavirus akasiaha kpuchie. N'ihi na onye ọ bụla ọzọ, Otú ọ dị, ị ga-mkpa ka zuo njem mkpuchi ma ọ bụrụ na enen ikpe nke virus amalite popping na-agbasa ná mba unu nke njem.
Nke a n'ọnụ nwekwara emekọ refundable njem, dị ka gbaa ụgbọ okporo ígwè, hotels, na njegharị. Ezie na ọ pụrụ eri ihe n'ihu na akwụkwọ, mgbanwe nke na-enwe refundable njem atụmatụ nwere ike akwụ nnukwu bụrụ na nke a kagbuo.
NDỤMỌDỤ 5: Anọ n'ebe ìgwè mmadụ!
Health ọkachamara dọrọ aka ná ntị na virus na-agbasa site na obodo kọntaktị, nke pụtara na ị ga-anọ n'ebe jupụtara ebe dị ukwuu dị ka o kwere omume. Nke a na-ebenata gị n'ebe ndị ọrịa. N'ezie, njem nleta na-adọrọ mmasị na-agbasaghị na-adọta ìgwè mmadụ, ma ị ka kwesịrị-enwe ike nleta n'oge anya-elu oge mgbe ndị ọbịa na-ala. N'ebe ndị dị ka Paris, a nwere ike ịpụta na ịga na Louvre na ngosi nka oghere ma ọ bụ dị nnọọ n'ihu nso kama n'etiti ụbọchị mgbe njem nleta okporo ụzọ ọnụ ọnụ.
N'ezie, o nwere ike ịbụ-agaghị ekwe omume iji zere ìgwè mmadụ kpamkpam, karịsịa ememme. Mgbe ukwuu nke Europe proactively kagbuo ememme ndị dị otú ahụ dị ka Italy si Carnivale na ọbụna Mobile World Congress expo na Spain.
NDỤMỌDỤ 6: Ledo onwe gị anya
Travel bụ ọtụtụ, anyị nile maara na. Otú ọ dị, na elu-ọsọ laa ọdịdị nke njem apụtaghị na ị chọrọ na-agba ọsọ onwe gị ragged. Ọ nwere ike ịda na-adọrọ mmasị na-eteta na mgbape nke chi ọbụbọ na gaba ruo mgbe ọ gafere etiti abalị, ma na ọ dị mkpa iji jide n'aka na ị na-elekọta onwe gị Amidst niile fun. Gịnị? N'ihi na zuru ezu na-ehi ụra na a ike nri pụtara gị ahu nwere ike chebe onwe ya megide ọrịa. Nke a dị mkpa karịsịa, ndị bụ ndị ọzọ susceptible ka ọrịa, dị ka ndị agadi ma ọ bụ ndị na ugbua ka enwere dịghịzi usoro.
Travel Safely N'oge The Coronavirus akasiaha – Bottom Line
Ezie na e nwere bụ na-a nchegbu maka ndị gbaa akwụkwọ njem n'oge a, e nwere ụzọ ka ị na-eme njem ahụ n'enweghị n'oge Coronavirus akasiaha. The COVID-19 na-efe efe, ma ọtụtụ mba na-adịghị ma na-emetụta na ndị ka mma maka njem. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ na-aga n'ihu na gị ezumike, iji ndị a Atụmatụ na-onwe gị ahụ ike. Jide n'aka na ị na-ehi ụra zuru ezu na eri nri nke ọma, na-niile gị chọrọ ọgwụ mgbochi, hichaa ebe gburugburu gị na disinfectant, na na-na njem gị atụmatụ mgbanwe. Buy njem mkpuchi na ezere jupụtara ebe dị ukwuu dị ka o kwere omume, na n'elu ihe nile na-maara. Na-onwe gị n'ezie kwadebere bụrụ na nke Coronavirus outbreaks gbapụta gị mba.
Onye nke kasị mma ụzọ njem n'enweghị n'oge coronavirus akasiaha bụ via ụgbọ okporo – enwe na mma na nchekwa nke na-ejegharị ejegharị ụgbọ okporo ígwè na-eji Save A Train!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “Olee otú Iji Travel Safely N'oge The Coronavirus akasiaha?” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/travel-safely-coronavirus/ የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Train njem Britain, Train njem Portugal, Train njem Spain, Travel Europe
Train njem, Train njem Austria, Train njem France, Train njem Germany, Train njem Italy, Train njem Sweden, Train Travel The Netherlands, ụgbọ okporo ígwè njem Atụmatụ, Travel Europe
ụgbọ okporo ígwè na-eto eto, Train njem Britain, Train njem France, Train njem Germany, ụgbọ okporo ígwè njem Atụmatụ, Travel Europe